Netizen Report: Iza no manaraka? Mihabetsaka ny sivana sy ny fanenjehana ny fampahalalam-baovao ao Venezoelà noho ny krizy politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2018 5:59 GMT
Mpianatra mpanao fihetsiketsehana miteny amin'ny Mpiambina Nasionaly ao Venezoela, nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2014. Saripikan'i Jamez42 tao amin'ny Wikimedia Commons (CC0)
Nahatratra haavo vaovao indray ny sivana an-tserasera sy ny fanenjehana mpisera media sosialy ao Venezoelà, izay mbola manao fihetsiketsehana hanoherana ny fahasarotana ara-toekarena sy ny fepetran'ny fahasalamam-bahoaka nateraky ny krizy politika mihatra ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.
Lasa faran'izay tena sarotra ho an'ny mpanao gazety ny manangom-baovao, satria iharan'ny fiampangana ho “manakorontana ny filaminam-bahoaka” na “mandrahona ny revolisiona” hatrany ry zareo. Lasibatra ihany koa ireo mpisera media sosialy mavitrika amin'ny firesahana amin'ny karazan'olona amin'ny resaka sivika.
Tamin'ny tapaky ny volana mey, nanjavona ilay mpisera Twitter malaza antsoina hoe Pedro Jaimes, izay miresaka toetrandro, toetran'ny andro ary ny fifamoivoizana an'habakabaka amin'ny mpanjohy efa manakaiky ny 80.000. Fotoana fohy monja mialoha ny fanjavonany i James, nisioka ny zotran'ny fiaramanidina iray mitondra ny Filoha Venezoelàna Nicolas Maduro, torohay izay azon'ny rehetra jerena ao amin'ny seha-baovao an-tserasera Efecto Cocuyo.
Tamin'ny 15 Jona, mihoatra ny iray volana nanjavonany, niantso ny fianakaviany i Jaimes mampahafantatra azy ireo fa voatazona ao amin'ny El Helicoide, toby miaramila lasa fonja an'ny Sampandraharam-Pitsikilovana Nasionaly Bolivariana (SEBIN) izy.
Mandritra izany fotoana izany, vao maika lasa mihasarotra indrindra ny fahafaha-miditra amin'ny sehatra mpanome torohay fototra sy seha-pifandraisana. Noho ny fiharatsian'ny tambajotra elekitrika noho ny tsy fisian'ny fikojakojana sy ny fanapahana azy ho fitsitsiana ny angovo, dia tsy voaantoka mihitsy ny fidirana aterineto. Ary ny vaovao mifototra amin'ny tranonkala sy ireo rafi-pifandraisana ihany no fomba tokana ahafaha-mifanakalo sy ahazoam-baovao mahaleotena amin'ny fanjakana.
Tamin'ny fiandohan'ny volana jona, voasakana miaraka amin'ireo toeram-pidirana ho an'ny Tambajotra Tor, izay ahafahan'ny mpisera manivaka amin'ny sivana an-tserasera, ny tranonkalan'ny seha-baovao lehibe anankiroa La Patilla sy El Nacional. Voasakana ihany koa ny tranonkala vetaveta, amin'izay mety ho andrana itsapana ny halalin'ny fahafaha-mametraka sivana an-tserasera ao amin'ny firenena. Any amin'ny firenena sasantsasany, ny karazana fepetra toy izany no mpialoha lalana amin'ireo ezaka hanamafisana ny sivana an-tserasera.
Palestiniana mpanao gazety notafihina sy noraofina ny findainy
Nitatitra tamin'ny MADA (Foibe palestiniana ho fampandrosoana sy ho fahalalahan'ny fampitam-baovao) ny mpanao gazety nanangom-baovao ny fihetsiketsehana fitakian-jòn'ny mpiasa tao Gaza tamin'ny 19 Jona fa notafihina sy nalain'ny vondron'olona manao fanamiana Mifandray amin'ny hetsika Hamas, izay mifehy ny tehezantanin'i Gazà ny finday sy ny fakantsarin'izy ireo na nopotehiny koa.
Tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 15 jona tao an-tanànan'i Ramallah tao amin'ny Morondrano Andrefana, nitatitra ny mpanao gazety fa nampiasa tetikady tahaka izany ny herim-piarovan'ny Fahefana Palestiniana hampitsaharana azy ireo tsy haka sary sy hitatitra momba ilay fihetsiketseham-panoherana.
Mpianatra Nizeriana iray naato noho ny fitarainany tamin'ny haratsian'ny fotodrafitrasan'ny sekoly
Kunle Adebajo, mpianatra lalàna ao amin'ny Oniversiten'i Ibadan, Nizeria no naato tsy hianatra enimbolana roa noho ny namoahany lahatsoratra mitsikera ny fitantanan-draharahan'ny oniversite. Tamin'ny 20 Avrily no nanoratan'i Kunle Adebajo hoe: “UI: Fifangarihan'ny tafo lamaody sy ny ao anatiny ratsy tarehy”, izay mamariparitra ny fahasimban'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao amin'ny oniversite ianarany. Nampiantso an'i Adebajo avy eo ny mpitantana ny Oniversity hiatrika filankevi-pitsipipifehezana, izay namahavaha ny lahatsoratr'i Adebayo ho “manivaiva, manala baraka ary tsy misy fanajana” ka namoaka ny fampiatoana azy.
Tao amin'ny lahatsoratra iray hoan'ny Sahara Reporters i Fisayo Soyombo, mpanao gazety fanadihadiana efa nahazo loka tamin'izany sady maintimolalin'ny Oniversiten'i Ibadan, nanondro ny hetsika fanasaziana an'i Adebajo ho “totohondry mivantana hoan'ny fahalalahan-gazety.”
Nesorin'ny manampahefana kiobàna tamin'ny bilaogera malaza iray ny fankatoavana maha-mpanao gazety azy
Sambany notsipahan'ny manampahefana kiobàna ny fankatoavana maha-mpanao gazety an'i Fernando Ravsberg, mpanao gazety orogoaiana, bilaogera menavazana sady masoivohon'ny BBC taloha, izay nanori-ponenana tao Kiobà hatramin'ny faraparan'ny taompolo 1990s. Nampiasa ny vola azony avy tamin'ny asany amin'ny maha-mpanao gazety vahiny nahazo fankatoavana azy i Ravsberg hanohanany ny bilaoginy malaza “Cartas desde Cuba” (Taratasy avy any Kiobà), toerana hanoratany ny tsikerany momba ny fiainam-bahoaka sy ny politika ao Kiobà, ary toerana ahitana lahatsoratra iray monja dia mahazo fanehoan-kevitra an-jatony avy amin'ny mpamaky. Toy izao ny tenin'i Ravsberg tamin'izao fiovana izao :
Tao anatin'ny folo taona ry zareo niezaka ny handambolambo ahy tamin'ny alalan'ny tolokevitra mahafinaritra, fandrahonana miafina, nanapaka ny nifiko, nitaky ny handroahana ahy hiala amin'ny firenena, ary ny ‘fampitandremana’ natao tamin'ny zanako. Tsy nisy nahomby izany rehetra izany hatramin'izao, fa ny fanesorana ny fankatoavana ahy ho mpanao gazety vahiny afa-miasa teto no nahavitan-dry zareo ny tsindrona farany ho an'i Cartas.
Tao Nikaragoà, hita ho nanova ny anaran-tambajotra WiFi-n'ny vahoaka ny vondron-kery mpanohana ny governemanta
Raha mbola mamaivay ny hetsi-panoherana anti-governemantaly ao Nikaragoà, olona an-jatony no nitatitra tamin'ny tapaky ny volana jona fa niova tampoka nandritra ny alina ny SSID (anaran-jotra Wi-Fi) an-dry zareo. Ireo rehetra nitatitra ny fisian'ny fiovana dia mpanjifan'ny Claro, sampan'ny goavan'ny fifandraisandavitra meksikana América Móvil daholo.
Ireo tambajotra WiFi dia nahazo anarana vaovao hoe “QuitenLosTranques,” izay midika hoe “Atsaharo ny barazy” — anondroana ilay tetipanorona fanoherana ifotony fahita hanakanana ny lalana. Tsy mitsahatra ny averimberin'ny mpiantsehatra avy ao amin'ny governemanta sy ny mpanohana azy ary efa lasa farangoteny (tenirohy na hashtag) ao amin'ny media sosialy izany hafatra izany. Nipongatra nanerana ny firenena ny barazy hanerena ny Filoha Daniel Ortega hiala amin'ny fahefana sy hiarovana ny fokonolona tsy ho tratran'ny herisetram-panjakana.
Tetikasa ao India manolotra finday maimaim-poana ho an'ny mahantra — saingy tsy voaantoka kosa ny fiainana an-takonana
Misy fisantaran'andraikitra iray ahafahana mahazo finday manolotra finday maimaimpoana ho an'ireo vehivavy loham-pianakaviana ao ambanin'ny tokonam-baravaran'ny fahantrana any amin'ny fanjakana Chhattisgarh, faritra avaratra atsinanan'i India. Na dia tsy misy vola aloa aza ny fahazoana ny finday, dia tsy maintsy manome ny laharan-karapanondrom-pireneny izay olona handray anjara amin'izany tetikasa izany — mifandray amin'ilay rafi-panondroana mampiady hevitra ao India antsoina hoe Aadhaar — ary manasonia taratasy ho an'ny governemanta “manaiky ny fampiasana ireny laharana Aadhaar ireny.” Ny famotorana nataon'ny tranonkalam-baovao mahaleotena Scroll.in no nampiseho fa tsy nampahafantarina ireo mpandray anjara ny mety hampiasan'ny governemanta ny laharana Aadhaar-ndry zareo.
Ireo voka-pikarohana vaovao
Tatitra ara-lohahevitra 2018 ho an'ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny fitsipika ara-botoaty – David Kaye, Iraka manokan'ny Firenena Mikambana amin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny zo halalaka haneho hevitra sy hiteny
Misorata anarana hahazoana ny Netizen Report
Nandray anjara tamin'ny fanatontosana ity tatitra ity i Ellery Roberts Biddle, Marianne Diaz, L. Finch, Oiwan Lam, Laura Vidal ary i Sarah Myers West.